Lozam-pifamoivoizana teny amin’ny RN4 sy ny RN7: olona efatra indray maty, maro ireo naratra | NewsMada
Tohivakana ny lozam-pifamoivoizana namoizana ain’olona sy nandratra olona maro, ny faran’ny herinandro teo teny amin’ny lalam-pirenena (RN4 sy RN7). Vokany, olona efatra indray namoy ny ainy…
Nampihoronkoditra! Mpivady (28 taona sy 29 taona) nandeha moto maty voahitsaky ny kamiaobe teny avaratr’i Behenjy, ny zoma alina teo. Raha ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary miasa ao Behenjy, avy namonjy raharaham-pianakaviana izy ireo ka hitodi-doha hiakatra ary teo Behenjy no nitranga ny loza raha nikasa hisongona kamiaobe teo alohany, kanjo tsy nahatafasongona satria nisy fiara nipoitra tampoka. Voasaringotr’ilay kamiaobe izy mivady ka notsenain’ny kodiaran-droan’ny fiara. Vokany, notetezin’ny fiara izy mivady ka maty tsy tra-drano. Potipotika tsy ny namantarana azy intsony ireo niharam-boina. Tazonina anaovana fanadihadiana kosa ilay mpamilin’ilay kamiaobe.
Ny asabotsy tokony ho tamin’ny 5 ora maraina, tonga nampandre ny tobim-paritry ny Zandarimaria Ambatolampy ny lehilahy iray mpamilina taksiborosy iray fa nisy lozam-pifamoivoizana nitranga tokony ho tamin’ny 3 ora sy 45 mn tao amin’ny toerana antsoina hoe Miadana, fokontany Miadamanjaka, kaominina ambanivohitr’i Manjakatompo, distrikan’Ambatolampy, PK 64+700. Nandeha teny an-toerana avy hatrany ireo zandary mpiandry raharaha nijery ifotony ity lozam-piarakodia ity.
Nosokirina tao anaty korontam-bin’ny fiara ny fatin’ny mpamily…
Taksiborosy iray nitondra mpandeha miisa 19 avy any Fianarantsoa hihazo an’Antananarivo no narian’ny hisatra tampoka raha niditra fiolanana anaty fidinana eo amin’io toerana io. Vokany, namantana tany an-tanimbary ny fiara. Olona dimy indray naratra, ny telo nalefa notsaboina ao amin’ny hopitaly HJRA. Ireo tsy naratra loatra kosa, nasaina nanatona toeram-pitsaboana ao Ambatolampy. Nahitana fahasimbana kosa ilay taksiborosy.
Maty tsy tra-drano ny mpamilin’ireo taksiborosy nifandona tao amin’ny kaominina ambanivohtir’Antanimbary, distrikan’i Maevatanàna, ny asabotsy antoandro teo. Nifanena tampoka tao anaty fiolahana ireto fiara ireto izay samy nandeha mafy kanjo tsy nahafehy familiana ny mpamily fa nifandona avy hatrany. Mafy ny fifandonana satria nosokirina tao anaty korontam-bin’ny fiara ny mpamily. Naratra avokoa ireo mpandeha tao anaty fiara ka nentina haingana namonjy ny hopitalin’i Maevatanàna sy nentina niakatra teny amin’ny HJRA. Tsy misy afa-tsy ny fitandremana fa tampoka ny fiavian’ny loza.